यत्तिकैमा हाम्रो अर्डर लिएर ती वेटर आइपुगिन् । मैले अनायशै सोधीहाले, तपाईं विवाहित हो ? उनले पनि सहजै उत्तर दिइन, हो । अनि श्रीमान के गर्नुहुन्छ ? उनले फेरि थपिन, म पेशाले एयर होस्टेजु हो तर विहेपछी त्यो काम छोडिदिए, अहिले यहाँ छु । स्वाभाविकै सोधें, किन छोड्नुभयो त्यता ? उनले थोरै शिर झुकाएर भनिन, श्रीमानले भनेर ।
-प्रदेश पोर्टल डटकमबाट